My blog dị mma karịa 99.86% nke blọọgụ ndị ọzọ niile! | Martech Zone
Agụrụ m nnukwu post site na onye ntaneti ohuru ohuru na Blog Burnout. O mere ka m na-eche ebe ebe ihe ndị a na-ede blọgụ na-eme m. Ọ bụghị na m na-eche maka ịkwụsị ịde blọgụ m, enweghị ohere nke ahụ! Ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu (na m na-ekwu nke ukwuu!). O di nwute, enwere m ike ọ gaghị adị mma - dabere etu ị si ele ya anya. Ya mere enweghị m ike ịkwụsị ọrụ ụbọchị m (ma achọghị m ime nke ahụ, ma).
Technorati kwadoro blog m na nọmba 74,061. N'iburu nke ahụ n'uche, echere m na ajụjụ a bụ otu o si dị mma nke ọma? Enwere m obi abụọ na onye ọ bụla n'echiche ziri ezi ha lere Technorati anya ma na-eche… M na-eche onye nọ n'elu 75,000?
Enwere m njikọ 67 site na blọọgụ 37. Yabụ, na ụwa nke nwere blọọgụ 52,900,000, ndị na-ede blọgụ 37 achọpụtala na ozi m dị mkpa iji jikọta m! Nke ahụ fọrọ nke nta ka ọ daa mbà!
On Influence and Automation họọrọ 74,061 nke blọọgụ 52,900,000!
N'aka nke ọzọ, enwere m ihe dị ka post 200 na blọọgụ m. Seth Chinekein dị nnọọ kụrụ 1,000 posts. Ikekwe enwere ohere mgbe 800 gachara karịa na m nwere ike iwebata onwe m na Technorati's Top 100. (O doro anya na m ga-ebipụta akwụkwọ 5 n'oge ahụ, kwa!)
Ihe a niile nwere ike ịdị ka ihe na-adịghị mma, mana ọ bụghị. Ka anyị tinye ntụgharị dị iche na ya. N'ime ụwa nwere blọọgụ 52,900,000, ịbụ onye a họọrọ na 74,061 adịghị oke njọ! Heck, nke ahụ dị n'elu 0.14% nke blọọgụ niile.
Yabụ na ị nwere ya. My blog dị mma karịa 99.86% nke blọọgụ ndị ọzọ niile! 😛
Sep 3, 2006 na 5:02 PM
Mee ka njikọ 68 ahụ: o)
Ọ na-esiri ike mgbe niile ịhazi ihe ịga nke ọma. Bụ "Jurassic Park" ihe nkiri ka mma karịa, sịnụ, "Siria"?
Sep 3, 2006 na 7:37 PM
Ọkara agha na ọkwa blog bụ ịkparịta ụka n'andntanet na ịchọta niche gị, ma ozugbo inwere ihe abụọ ahụ, mgbe ahụ ihe na-amalite ịgbalite gị, ọkachasị na Technorati.
Na-agbali ịgbawa ụlọ ọgbakọ Technorati 50K n'onwe m.
Sep 5, 2006 na 12:28 PM
A ọma n'usoro ị nwetara n'ebe doug, m na 90, xxx nso m, ọ bụghị ihe ọjọọ n'ihi na a ọhụrụ blog ma ọ bụrụ na m na-ekwu ya onwe m 🙂
M na-atụle blọọgụ nke ọma site na ndị na-agụ ya, na nkọwa ha. Ezigbo ndị na - agụ akwụkwọ dịka Yvonne, Rico na ndị ọzọ na - eme ka blog bụrụ ebe enyi ma nye ya ikuku dị mma. M blog n'ihi na m chọrọ, a technorai rank is just a nice extra.
Feb 1, 2007 na 1:10 PM
E kwuru nke ọma. Na-enwe ekele mgbe niile maka echiche gị adịghị mma. Nọgide na-arụ ọrụ dị ukwuu!